Mhoro. Sei murume asiri kunyora? ndawana dambudziko! Uri kuitei? Kwete makumi maviri nematanhatu, uye handisi kutya kuve ndega. Unofanira kuzvikoshesa. Ndiye here mukomana wekupedzisira mumusha? Ndinga…
Ndokumbira unditaurire, ndinonyatsoda rubatsiro! Chii chandinofanira kutaura kunyorera kune wangu waimbova mukomana-mukomana kuti adzoke?! Usamumirira musikana, Haazouyizve. Uchawana mumwe mukomana, Kana kuti achakuwana. Hazvina kukosha ...
Chii chekutaura kumusikana kuonekana kana uchiparadzana? Ngatigarei shamwari. Ndinoremekedza sarudzo yako uye ndinoshuvira iwe mufaro uye ndiwane munhu anokuda sezvandinoita. muudze kudaro ...
Nei Christina naDanya Vakanaka-hunhu vakarambana? Panzvimbo pekubvunza mibvunzo yeupenzi nezvevamwe vatorwa, zvingave zviri nani kana ndikaverenga mabhuku akachenjera !!! Iwe unofanirwa kuvabvunza kuti sei ivo ...
Sei Putin akaramba mukadzi wake? Zvimwe imwe PR yerumwe rudzi…. akafa ... uye zvino apetwa kaviri. Nekuti kune avo vanosimudza mweya kunhovo, sekutonga, ivo pachavo vane mweya ...
Akarara nemwanakomana weshamwari ndoita sei? Hure ... Usaite chero chinhu, kukwezva kwake kuchapfuura, uye haasi mudiki, achanzwisisa zvese. ..Zvinorwadza kuti amai vangu hava ...
Iwe unofarira sei tsamba yekuonekana kune mudiwa wako? ...
Iwe unofarira sei tsamba yekuonekana kune mudiwa wako? ... achichema zvakajairwa. Iwe unonyora mhinduro yako kuitira kuti asatombokanganwa kana neshoko rimwe chete pairi, kuti agare achitambanudzira kwauri. Zviripachena kuti izvi hazvisi ...
Ndiani anoziva dudziro - asta la vista?
Ndiani anoziva dudziro - asta la vista? Nyika yekuonekana Iyi iri muchiSpanish - ndokuona ... zvakanaka, kana zvirizvo, ipapo: Kusvikira iyo "yekutarisa" Kukuona, usare, ndokuona Asta la vista kuonekana ...
Hupenzi, asi varume havana kana hanya neni zvachose. Uye ini handisi kuwedzeredza! Hazvigone kudaro! Zvekuti hapana kana mukomana mumwe chete asingateereri musikana ?? ? Nditumire mufananidzo wako…
Nziyo dzakanakisisa nezvekuparadzana, kurwadziwa. Sarudzo dzako Mikhail naIrina Krug "Usasiye rudo rwangu" Hupenyu-hwakavhiringidzwa hupenyu, Nekuda kwembiri-rudo, tenda uye mirira, Ntl-yakaputsika mwoyo, Potap naKamenskikh-sei wakanyarara, Splin-Plastiki ...
Raira !!! Maitiro ekukorokotedza wako wekare-mukomana pazuva rekuzvarwa kwake kutsva kutsva kwakaonekwa ??? Gore idzva muhupenyu hwako! Ngaave asina nhamo, Joy anokupa chete, Pasina kunyemwerera ...
Ndiani akasangana neUzbek? Chii chavakaita muhukama nevakadzi veRussia? ungavimba navo here? kufamba? Irina Ini handidi kuva asina hunhu, asi murume wako kana mukomana paakakupa ruva rekupedzisira ...
Ungatanga sei kurarama mushure mekufa kwemurume wako waunoda? kunyangwe zviome sei kwauri nekuti hupenyu hunoenderera. Chinhu chakakoshesa ndechekusasungirirwa, kutaurirana zvakanyanya, nekuti nguva inoporesa Kwekutanga, iwe unongoda ku ...
Usatsemuke nemazwi ehungwaru pamusoro pekuparadzaniswa newaunoda! ... Isu tinoona asphalt iri pasi petsoka dzedu, tichikanganwa kutarisa kudenga ... Tinotarisa mumazana emaziso, tichikanganwa ruvara rweanodiwa ... Tinobvarura mifananidzo, tichiziva kuti mifananidzo icharamba iri ...
kuziva sei kana mukomana achindida ?? Ida uye unakirwe Hmm. Vana, rudo rwakadii? Ini ndinonzwisisa kuti ini ndoda asi chaizvo, ino ndiyo nguva yekudzidza! Ndevapi vakomana vanogona kuve pazera iro ...
tsamba kune waunoda pane sarudzo dzenzvimbo. Ndapota, Vakadzi Vakadzi, kuti munhu anzwe kuti arangarirwa, vakamirira imba. unoda chiiko iwe? Hongu, murombo, anogara pasi pasina. Zvakanaka, ndakabira chenib ...
Ndibatsirewo kunyora rinoshungurudza vhezheni vhezheni yemudiwa wako mukomana? Iye mavhesi aya kune nyeredzi, zvirinani awane imwe nyowani, izvi zvichamutungamira kumifungo inosuruvarisa. Ini handina kusevha, ini handina kuichengeta, ini ndakaipa uye ndikarasikirwa Izvo kunyangwe hupenyu hwangu hwese ...
Ndakapfupisa nekutumira wangu wekare musikana tsamba yekuonekana. tsamba vn, ndinonyatsoda kumunyorera, asi zvakakosha here ??? Murege aende - kana uyu ari musikana wako, anodzoka ari ega Zvirinani ...
ndeipi mibvunzo yandingabvunza mukomana wandinoda ?? Heino runyorwa rwemibvunzo yemusikana. Ndeapi mafirimu aunofarira? Chii chaunofarira bhaisikopo? (wega) Rudzii rwemumhanzi rwaunoda iwe? Unoda kuenda kumakirabhu? Chii che ...
Mukadzi wangu akandisiya nezuro. Kuraira kuti ungakunda sei kushushikana? Zvekuita? Gara pasi uye upe mhepo pachibhakera chako izvozvi, nekuti izvo zvawakarwira - ndizvo zvawakamhanyira. Pakutanga, iwe waifanira kufunga ...
Mibvunzo ye74 mu database yakagadzirwa mu 0,537 masekondi.